Vanuatu vana vanokanganiswa neChamupupuri Pam
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Vanuatu vana vanokanganiswa neChamupupuri Pam
Save the Children yatanga chikumbiro chekukurumidzira chemari yekubatsira vana vanotambura zvikuru nemhuri dzavo dzakakanganiswa neChamupupuri Pam, icho chakabvarura kuburikidza neVanuatu neChishanu manheru.
Save the Children's Vanuatu Country Director, Tom Skirrow, achitungamira mhinduro yesangano rinobatsira akati, "Mamiriro ezvinhu pano mangwanani ano aparadza chose - dzimba dzaparadzwa, miti yadonha, migwagwa yakavharwa, uye vanhu vari kudzungaira mumigwagwa vachitsvaga rubatsiro.
"Kutaurirana kwakadzika munzvimbo zhinji dzenyika nehukuru hwese hwekuparadza kusinga zikanwe kwemazuva mazhinji. Masangano anobatsira akatarisana nedambudziko rakakura kuti vasvike kune avo vanotambura zvikuru mhuri nemhuri nekukurumidza sezvinobvira. ”
Kune mitezo isina chokwadi ye44 yekufa.
Sevha Vana vakagadzirira kukwira mhinduro yekukurumidzira kusanganisira kupa yakachena mvura yekunwa, kugovera yakakosha imba uye hutsanana zvinhu uye kuona kuti vana vanochengetedzwa vachitevera dutu.
Vashandi vanobva kubazi rezvekubatsira vakaenda pasuo nesuo muguta guru rePort Vila dutu iri risati rakurudzira vagari vanogara mudzimba dzekugara kuti vabudire kune zvivakwa zvakachengeteka.
Nhumwa dzeMISA Zimbabwe dzinoshanyira Namibia
NEET's Culture Day 2015 theme inosimudzira kuverenga muJamaica
Murwere wekutanga akarapwa mucohort 2 SARTATE™...
McDonald's anosiya Russia zvakanaka
Colon Cancer irikukwira nekuda kweCOVID-19
Hawaiian Air inotangazve sevhisi yeOakland-Kona, inowedzera nyowani ...
Chokutanga uye chakakosha, gasi reAfrica rinofanira kushandiswa muAfrica
Fracking Fluids Uye Makemikari Musika Anokwikwidza...
Los Angeles Convention Center inorambidza kushandisa imwe chete mapurasitiki ...
Canada Jetlines inozivisa kusvika kwekutanga ndege mu ...
Barbados Chikamu cheElite Boka seUNESCO World Heritage...
Yakaderera Shuga Iced Teas Ingori Panguva Yezhizha pikiniki